LinkedIn သုံးရင် ဘာတွေဆောင်လို့ ဘာတွေရှောင်ရမလဲ
24 May 2019 . 5:17 PM
အခုနောက်ပိုင်းမှာ LinkedIn ဟာ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားတွေကြားမှာ ကြားခံနယ်တစ်ခုလို ဖြစ်လာပြီ။ အလုပ်ရှင်တွေသာမက Recruitment Consultant တွေကပါ ဝန်ထမ်းလိုချင်ရင် LinkedIn ကနေပဲ ရှာကြတယ်။ LinkedIn မှာ အချက်အလက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထည့်ထားရင် အလုပ်ရဖို့ မခက်တော့ဘူး။ ဝန်ထမ်းရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် မဖြစ်မနေသုံးရမှာက LinkedIn လို့ပဲ ပြောချင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း LinkedIn အသုံးပြုသူဟာ လေးသိန်းကျော်တောင် ရှိလာပြီဆိုတော့ ကံကောင်းရင် Job Offer တွေတောင် ရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် LinkedIn အသုံးပြုရာမှာ ဆောင်ရရှောင်ရမယ့်အချက်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
(၁) မသက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံကို မထည့်ပါနဲ့။
ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိအလုပ်က Graphic Designer ပေါ့။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းစလုပ်တုန်းက Site Engineer အနေနဲ့ စခဲ့မယ်ဆိုရင် နယ်ပယ်မတူတဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံကို LinkedIn မှာ မထည့်ပါနဲ့။ တကယ်လို့ အဲဒီလိုထည့်ထားမယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံနောက်လိုက်ပြီး နယ်ပယ်မတူတဲ့ အလုပ်တွေကို လျှောက်ပြောင်းနေတယ်လို့ Recruiter တွေကထင်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲဒီတော့မသက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကိုမထည့်စေချင်ပါဘူး။
(၂) Skills & Endorsements ကို သတိထားပါ။
LinkedIn Profile ရဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ထည့်သွင်းရာမှာ လုပ်ငန်းနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကို မထည့်ပါနဲ့။ ဥပမာ – ကိုယ့်က ကျောင်းဆရာဆိုရင် ထည့်ရမှာက Teaching ဒါမှမဟုတ် Parenting ပဲ ထည့်ရမှာပါ။ အဲဒီနေရာမှာ Sales and Marketing ၊ Account Management တို့လို မဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို မထည့်ရပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က Endorsement ကိစ္စပါ။ ကိုယ့် Connection ထဲမှာရှိတဲ့ လူတွေက Skill ကို Endorse လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ အလုပ်တွဲမလုပ်ဖူးတဲ့သူက ကိုယ့် Skill တွေကို Endorse လုပ်ထားရင် လက်မခံသင့်တဲ့ကိစ္စပါပဲ။ အလုပ်တောင် တွဲမလုပ်ဖူးတဲ့လူက ကိုယ့်စွမ်းရည်ကို သိနေတယ်ဆိုတာ ယုတ္တိနည်းအရ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တာပါ။ အဲဒီလိုမျိုး Endorse လုပ်လာရင် Invisible ပဲလုပ်ထားလိုက်ပါ။
တစ်ခုသိထားရမှာက LinkedIn က Facebook လိုမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ Facebook မှာ လူမျိုးပေါင်းတစ်ရာ့တစ်ပါးရှိပေမယ့် LinkedIn ကတော့ အလုပ်ကိစ္စသပ်သပ်ပဲ။ အဲဒီတော့ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံ ဒါမှမဟုတ်စာသားကအစ လူကြီးလူကောင်းဆန်သင့်တယ်။ ကလေးကလားပုံတွေမတင်သင့်ပါဘူး။ ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ အလုပ်ရှင်ဘက်က ခေါ်ခန့်ချင်လောက်တဲ့ဓာတ်ပုံမျိုးကို တင်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်။
(၄) LinkedIn Summary ကို သေချာရေးပါ။
LinkedIn Summary ဆိုတာက ကိုယ့်အကြောင်းအကျဉ်း၊ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံနဲ့ ခံယူချက်တွေကို ရေးသားတဲ့နေရာပါ။ ကိုယ့် Profile ထဲကို ဝင်လိုက်တာနဲ့ ပထမဆုံးတွေ့ ရမှာက LinkedIn Summary ပါ။ အကြောင်းအရာတွေကို ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် ရေးနိုင်မယ် အထူးသဖြင့် View Profile လုပ်တဲ့လူကိုကိုယ့်ဘက်ကရှင်းပြတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါက်အောင် ရေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပါ။ ကြားလူတစ်ယောက်က ရှင်းပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့။ LinkedIn အသုံးပြုရာမှာ တခြားလိုက်နာရမယ့် အချက်တွေလည်း ရှိ်ပါသေးတယ်။ နယ်ပယ်တူတဲ့ လူကိုပဲ ကိုယ့် Connection ထဲမှာ ထည့်ထားတာမျိုးပေါ့။ တခြားစည်းကမ်းချက်တွေကို ဖြည့်စွက်ပြီး ပြောသွားပါဦး။
Reference and Photo Credit – Forbes
by Ngul Ciin . 38 mins ago